Posted by Unknown on Wednesday, 13 November 2013 at 04:51
ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဒဏ်ရာအတိုင်း ဆက်ဆံတတ်လို့
ဘာအမှတ်တရမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ မွေးနေ့တိုင်းကို
ဒီနှစ်ဒီရက်မှာ မွေးနေ့မွေးနံ တိုက်ဆိုင်တော့လဲ
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နီးပါး နားလည်ခဲ့ပြီးပြီလေ…။
ရင့်ကျက်ပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက်လဲ
မသိနိုင်တဲ့ ငိုကြွေးခြင်းတွေ ရင်ထဲကနေ မွေးထုတ်ဦးမယ်…။
တကယ်လို့ မွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရက်လည်ပဲဖြစ်ဖြစ်
(နှင်းဆီရဲ့မွေးနေ့က နိုဝင်ဘာလထဲမှာရှိပါတယ်။ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း နှင်းဆီတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော် အမြဲငိုရတယ်။
နှင်းဆီရဲ့ မကျရောက်သေးတဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရရေးထားတဲ့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်လေးပါ)
Labels: ခံစားချက်5comments
Posted by Unknown on Saturday, 15 June 2013 at 08:57
ဘယ်အရာကိုမှ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားခွင့်မရတဲ့လောကကြီးမှာ
သမီးလေး အမြဲတမ်း ကိုင်ထားခွင့်ရချင်တယ်ဖေဖေ...
ဖေဖေ လို့သာ တမ်းတယောင်ယမ်းခေါ်တတ်တဲ့
ဖေဖေသာ သမီးလေးရဲ့ စိတ်အစဉ်ကို မေတ္တာနဲ့အကောင်းဆုံး ကုစားပေးနိုင်သူအဖြစ်
ဖေဖေ ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုနဲ့တင်
ဖေဖေ ဘာလုပ်လုပ် ဘာဖြစ်ဖြစ်
ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ ဖေဖေသာ သမီးလေးအနားရှိရင်
ဖေဖေနဲ့သမီးလေး အတူတူ ရှိနေစေချင်တာပေါ့...
ကြေကွဲနေတဲ့စိတ်နဲ့သာ ရပ်တည်နေတဲ့ သမီးလေးရဲ့နေ့ရက်တိုင်း
တစ်ခုခုဆို ဖေဖေ လို့ အားကိုးတကြီးခေါ်ပြီး
သမီးလေးရဲ့ ဖေဖေ လို့ခေါ်သံကို ကြည်နူးစွာလက်ခံပေးပါ...
သမီးလေးလျှောက်မဲ့လမ်းခရီးမှာ ဖေဖေ က သမီးလေးရဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်အဖြစ် ရှိနေပေးပါ...
ဖေဖေ့ကို ချစ်တယ် ဖေဖေ...။။။
(နှင်းဆီ စိတ်လေနေတာကြာပြီ။ ချစ်သောဘလော့ဂါမိတ်ဆွေဆီလဲ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ခွင့်လွှတ်ပါတော့။ မနက်ဖြန် ၁၆.၆.၂၀၁၃ မှာ ကျရောက်မဲ့ Father day အတွက် နှင်းဆီရဲ့ ခံစားချက်လေးနဲနဲအန်ထုတ်ရင်းစာမျက်နှာပေါ်တင်မိပြန်ပါတယ်။)
Labels: ခံစားချက်4comments
Posted by Unknown on Monday, 20 May 2013 at 05:19
သြော်... မေးမှ မေးတတ်ပေတယ်
အမုန်းတွေနဲ့လား ဆိုတဲ့ ရိတဲ့တဲ့စကားတော့ လာမမေးကြေး.....
Labels: ကဗျာ4comments
Posted by Unknown on Saturday, 18 May 2013 at 18:25
ပြီးတော့ နွေးထွေးခြင်းတွေ တပွေ့တပိုက်ကြီးနဲ့
ရင်ထဲက အဖြူရောင် ကဗျည်းကျောက်စာတိုက်ထဲမှာလဲ
သူ့ကို ကျနော် သိပ်ခင်တာ....
သစ်ပင်လို တည်မြဲတဲ့ ခင်မင်မှုမျိုးနဲ့
ဘယ်လိုထိခိုက်မှု နာကျင်မှုမှ မပါပဲ
It doesn’t matter where you are or what you are doing...
You are always there for me, supporting me, encouraging me , listening to me and all those other things that brother do...
You are good boy bro...
I always stay beside to u... whatever...
Posted by Unknown on Thursday,9May 2013 at 09:31
Labels: ကဗျာ3comments
Blog Archive Nov 13 (1) Jun 15 (1) May 20 (1) May 18 (1) May 09 (1) Apr 29 (1) Apr 12 (2) Apr 08 (2) Mar 28 (1) Mar 26 (2) Mar 21 (1) Mar 20 (1) Mar 18 (1) Mar 11 (1) Mar 06 (1) Mar 03 (1) Feb 28 (1) Feb 20 (1) Feb 18 (3) Feb 17 (1) Feb 14 (1) Feb 13 (1) Feb 06 (1) Feb 05 (1) Feb 03 (1) Jan 31 (1) Jan 29 (6) Jan 28 (4) Jan 24 (2)
Computer Error ပြသာနာဖြေရှင်းနည်းများ(4.8MB)
ခပ်ရင့်ရင့် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ
တေမိဇာတ် ခင်းမိခြင်း အကြောင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့စကားက ကျွန်မအတွက် တော်တော့်ကို နားလည်ရခက်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခု။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်မ သေချာမသိပေမဲ့ ပတ်- ပတ်...
ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်လောက်ကပေါ့။ အဲဒီတုန်းက သူမ အသက် ၁၀နှစ်။ ၄တန်း ကျောင်းသူဘ၀။ ဘာပြသာနာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ သူမသေချာမသိ။ ...
စိတ္တဇဆန်ဆန်ပြုမူတတ်သလို ကြောင်တောင်တောင်တွေးခေါ်တတ်တယ် ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဒဏ်ရာအတိုင်း ဆက်ဆံတတ်လို့ နားလည်ဖြေသိမ့်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ...
အရိုးအသား တောင်မခွဲနိုင်ပဲ နစ်နစ်မောမော ကို ချစ်ခဲ့တာ လက်တွေ့က ကဗျာမဆန်မှန်းတော့ သိတာပေါ့ ကာရန်လေးတော့ ထပ်တူကျမယ် ထင်ခဲ့တယ်လေ... ...
ထိုညက ယခုလိုမျိုး အိုက်စပ်စပ်နွေည တစ်ည မဟုတ်ခဲ့။ မိုးသံလေသံတွေနဲ့ စောင်ခေါင်းမြှီြးံခုံ အိပ်လို့ကောင်းခဲ့သည့် ညတစ်ည။ ++++++++++...
"ငယ်စဉ်က ကလေးတို့ဘ၀မှာ.... ပျော်ပါးဖို့ရာ... လွယ်ပါတယ်... ကိုယ်ရတာနဲ့... တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ... စားချိန်မှာ.. ၀င်စားမယ်.. အိပ်ချိန်...
“မင်္ဂလာပါ ဆရာမ” “မင်္ဂလာပါ တပည့်တို့ရယ်” ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိလှသော ဆရာမနဲ့တပည့်များ၏ နှုတ်ဆက်သံသည် ကျောင်းဝန်းထဲက စာသင်ခန်းအတွင်း...
အိမ်မက်တွေ ဆင်ဆာဖြတ်ခံရတဲ့ဘ၀ အသက်ရှုရတာတောင် ခပ်ကျပ်ကျပ်ပဲ... ဖွင့်ချလိုက်တဲ့သံယောဇဉ်တွေက အနံ့ အရသာ မရှိ လို့လားမသိ ဒီနေ့အ...
Copyright © နှင်းဆီရောင်